Tete: Mboro yemurume wangu haigone kunditundisa! - Masasi eHarare
Ask Tete Molly Tete: Mboro yemurume wangu haigone kunditundisa!
Tete Molly, ndine 19 months ndaroorwa asi ndine dambudziko rekuti murume ndomuda chose uye iye anondida asi pabonde handisviki chaipo ipo nemboro yake, but ndiri ndega ndinosvika pakutunda. Murume ane zvese zvakakwana uye anoshanda basa. Ini ndini ndine dambudziko.